Waa rasmi: Cunno yaraanta ayaa saameyn ku leh Apple soo saarista qaar ka mid ah MacBooks. | Waxaan ka socdaa mac
Waa rasmi: Cunno yaraanta ayaa saameyn ku leh Apple soo saarista qaar ka mid ah MacBooks.
Yaraanta jajabka adduunka ayaa umuuqatay utopia. Waxaa la sheegay in dhamaan shirkadaha waaweyn ay haysteen keyd ku filan si aysan dhib ugu qabin markay soo saaraan qalabkooda. Si kastaba ha noqotee iyadoo Wararka Foxconn iyo iibiyeyaasha kale, arrimuhu waxay bilaabeen inay noqdaan kuwo murugsan. Hadda waa la ogyahay in Apple ay yeelan karto dhibaato samaynta moodooyinka MacBookga.
Waxa cad ayaa ah in ay jirto wax soosaara heer caalami ah oo xaga wax soo saarka ah iyo saamiya la'aantu hada saamaynayso dhamaan noocyada warshadaha. Ku dhowaad dhammaan qalabka maalmahan waxay ku tiirsan yihiin silikoon heer uun ah. Warshadaha baabuurta waxaa si gaar ah loogu garaacayaa maaddaama soo-saarayaashu ay yihiin kuwo fudud ma soo saari karaan gawaari intaas le'eg sidii la qorsheeyey iyadoo la sugayo helitaanka qaybaha.
Laakiin shirkadaha adeegyada tikniyoolajiyadda ayaa sidoo kale bilaabay inay la silcaan cawaaqibka abaartan. Waxaa la sheegay in Apple uusan ka mid noqon doonin kuwa sida aadka ah ay u saameysay yaraantaan hadana warbixinnada cusub waxay ku andacoonayaan in shirkadda tufaaxa ay bilaabi doonto inay dhibaato dhanka wax soo saarka ah ku haysato qaar ka mid ah moodooyinka Mac. Moodooyinka MacBook iyo waliba iPad Pro.
Iibiyeyaasha MacBook-ka waxay isku arkaan inay ku jiraan culeys fure: habka isu-imaatinnada qaybaha looxyada wareega. Dhibaatooyinkan ayaa taas macnaheedu ahaa Apple ayaa lagu qasbay inay dib u dhigto soosaarka "qayb ka mid ah amarada qaybaha" qeybta labaad ee sanadka, sida ku xusan warbixinta kor ku xusan oo ay diyaarisay Nikkei. Dukumeentiga ma sheegayo noocyada iPad iyo MacBook gaar ahaan ay saameeyeen.
Tani waxay macnaheedu noqon kartaa in Apple ay tahay inuu kala doorto labada go'aan ee xun ee isticmaalayaasha dhammaadka ah. The daahinta keenista qalabkan ama kordhinta qiimaha. Haddii aad doorato tan labaad, tan ugu horreysa ayaa dhaqso u bilaabmi doonta oo waxay saameyn ku yeelan doontaa laba jibbaar inta ay tahay. Haddii aad doorato tan ugu horreysa, waqti ayey ku qaadan kartaa in suuqu soo kabto, oo dadka qaar dhahaan wuxuu noqon doonaa bartamaha 2022.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Waa rasmi: Cunno yaraanta ayaa saameyn ku leh Apple soo saarista qaar ka mid ah MacBooks.
Faahfaahinta mashruuca xorriyadda ee Ciyaaraha Epic sida laga soo xigtay Apple: Wax walba maahan sida ay u muuqato
MacOS Big Sur 7 beta 11.3 loogu talagalay horumariyeyaasha